Ampivoary ny menio efijery feno amin'ny tranokalanao miaraka amin'ireo safidy 10 | Famoronana an-tserasera
10 menus CSS feno efijery ho an'ny tranonkala rehetra
ny menus CSS feno efijery Izy ireo dia mora ampiasaina amin'ny fampiasana sary goavambe izay manasongadina ny lohahevitry ny tranonkala, na pejy fitaterana, tranokala na koa eCommerce izay tianay hanasongadinana vokatra manokana.
Ity andiana fizarana 10 feno na efijery CSS feno ity araho ny fenitra ankehitriny ary mitarika anay izy ireo hampiditra an'io singa fanampiny kalitao amin'ny famolavolana tranonkala io izay tsy maintsy tadiavintsika anio. Izahay dia efa nanaraka andian-dahatsoratra hafa mitovy amin'izany, toa ny menus atsinanana atsinanana o ity hafa. Andao hiaraka amin'ireo menus CSS 10 feno efijery.
1 Lisitry ny efijery feno
2 Fikarohana efijery feno
3 Lisitry ny efijery feno
4 Fizarana efijery Flexbox
5 Fikarohana efijery feno
6 Menio efijery feno CSS
7 Lisitry ny efijery feno
8 Sakafo efijery feno CSS3 feno
9 Fikarohana efijery feno
10 Lisitry ny fitetezana CSS madio
Lisitry ny efijery feno
Ity kaody ity miaraka amin'ny Flexbox kely sy jQuery mitondra antsika amin'ny menio efijery feno kanto izay misongadina amin'ny sarimiaina marina. Ity sary mihetsika ity dia mametraka antsika alohan'ny fizarana samihafa. Lavorary hanavao ny tranonkalantsika anio.
Ny menio efijery feno iray hafa tena misy ankehitriny milamina sy sary mihetsika tsara tetezamita izay mitondra antsika any amin'ireo faritra samihafa miseho amin'ny habeny tsara. Mahagaga ary tena lamaody.
Lisitry ny efijery feno farafahakeliny izay manaraka ny kalitaon'ireo teo aloha, na dia izany aza amin'ny foto-kevitra dia tsotra kokoa izy io. Tsy midika izany fa iray hafa manana kalitao tena lehibe ny fanavaozana ny tranonkalantsika sy hampiavaka azy amin'ny mpitsidika.
Fizarana efijery Flexbox
Ity menio ity tsy mandeha tsara amin'ny IE. Na izany na tsy izany dia iray hafa manana kalitaon'ny fahitana avo lenta ho an'ireo karazana mpanjifa mitady zavatra hafa ireo, saingy manana endrika tena matihanina izany. Notanterahina tsara ho iray amin'ireo miavaka indrindra ao anaty lisitra.
Tianay ny mametraka an'io ho sarotra ho anao amin'ity andiana menus ity. Ity kosa dia tena kanto ary mitondra sary mihetsika milamina. Tena saro-pantarina ho an'ny tranonkalanao. Tsy azonao atao ny tsy mahita azy io, noho izany ianao dia efa manana safidy hanavao ny tranokalanao miaraka amina kaody toa ilay atolotra ao amin'ny codepen. Manoro hevitra anao izahay hahita ny ohatra mba hahafahanao mifanerasera aminy ary amin'izay dia ho hitanao akaiky kokoa ny endrik'izany.
Menio efijery feno CSS
Ity menio efijery feno ity dia ny tsotra indrindra ny lisitra iray manontolo. Ny kisary hamburger hita eo ankavanana sy ny menio izay miseho rehefa manindry azy isika, eo afovoan'ny efijery. Mendrika ny antsoina hoe menio efijery feno vita amin'ny CSS.
Ity menio efijery feno ity dia CSS madio ary manjary maizina ny any aoriana ka rehefa avy nanindry ny bokotra hamburger isika dia miseho alohan'ny safidy menio samihafa miaraka amina sary mihetsika riandrano voalamina tsara. Kanto dia tsy misy fisalasalana.
Sakafo efijery feno CSS3 feno
Lisitry ny efijery feno miaraka a andiana fiovana sy vokany vokarina amin'ny CSS3 madio. Somary tsotra amin'ny fiterahana, na dia tsy mety tsy hita avy amin'ity lisitra ity aza izy io mba tsy hitovizany amin'ny hafa rehetra.
Lisitry ny fitetezana CSS madio
Izahay dia mamarana ny lisitra miaraka amin'ny menio fitetezana efijery feno izay vita amin'ny CSS madio. Amin'ity indray mitoraka ity dia manana isika bokotra hamburger eo ankavia ny efijery izay mampihetsika ny sarimiaina boribory misokatra mba hampisehoana ireo fizarana samihafa amin'ny menio. Miadana angamba ny tetezamita, saingy azo ovaina ny mametraka azy io araka ny itiavantsika azy.
Avelanay ianao andiam-bika amin'ny CSS amin'izay mba fampidirana lahatsoratra izay hahazo aina kokoa ary mahafinaritra ho an'ny mpitsidika tranonkala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » 10 menus CSS feno efijery ho an'ny tranonkala rehetra
Nahazo an'i Magento $ 1.680 miliara i Adobe